United Kingdom, West Midlands, Birmingham, Birmingham City Centre, B1 1th
Ikhodi Yokuposa: B1 1th
Izici: Neutrally decorated throughout, Convenient location, Fully fitted kitchen with appliances, Master en-suite, 24hr concierge service, Secure basement parking, Use of gymnasium, Terrace & city views
Leli fulethi elihlakaniphile, elisesitayeleni, elikhangayo nelisendaweni ekahle elinamagumbi okulala amabili kanokusho elisezindaweni ezifunwa yiCity Centre. Ukubuka kubalulekile ukwazisa le ndawo. Iqukethe ikhishi elihlanganiswe ngokuphelele ngezinto zikagesi, indlu yokugezela yomndeni eneshawa, kuvulandi omkhulu, indawo enkulu yokuphumula evulekile / igumbi lokudlela, indawo enamakamelo okulala amabili. Ezinye izinzuzo zibandakanya insizakalo yamahora angama-24 yama-concierge, i-gymnasium, igumbi lengqungquthela nokufinyelela okulula enkabeni yedolobha. Ukupaka izimoto ezingaphansi okuphephile nakho kuyinzuzo eyengeziwe kuleli flethi. Ukubukwa okumangazayo kweBirmingham kusuka kuvulandi kuthatha umoya.
Sure Sales Lettings Birmingham
, B1 1th
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B35 6pu
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B28 8rx
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B12 0ps
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B1 3qq
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B3 1qg
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B1 2aw
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B43 6qu
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B1 1pr
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B31 4bl
Izikole eziseduzane B1 1th